ESI EWEPU IWEGHACHI NA TWITTER - TWITTER - 2019
Ọnọdụ agaghị agafe na Steam dị mkpa iji nwee ike igwu egwuregwu nke ọrụ a, na-enweghị ịbanye na Ịntanetị. Ma mgbe a ga-eweghachite Ịntanetị, ị ga-ehichapụ ọnọdụ a. Ihe bụ na ọnọdụ offline ahụ anaghị ekwe ka iji ọrụ netwọk ọ bụla. Ị gaghị enwe ike isoro ndị enyi gị kwurịta okwu, lee teepu ọrụ, ụlọ ahịa Steam. Ya mere, ihe ka ọtụtụ n'ime arụmọrụ nke egwuregwu a agaghị adị adị.
Gụọ ka ị mụta otu ị ga-esi gbanyụọ ọnọdụ offline na Steam.
Kwadoro na offline na Steam bụ dị ka ndị a. Na ọnọdụ a, ịnwere ike igwu egwuregwu naanị, na netwọk ọrụ n'ime ha agaghị adị.
Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo ahụ, na steam Steam, e nwere ihe edemede "ọnọdụ offline", na ndepụta ndị enyi adịghị. Iji gbanyụọ ọnọdụ a, ịkwesịrị ịpị ihe 6 n'ime menu kachasị elu, wee họrọ ihe ahụ "banye n'ime netwọk".
Mgbe ịchọrọ ihe a, gosi ihe ị mere. Ọ ga-ejikọta na netwọk Steam dị ka ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ na i nyebeghị aka nbanye akpaka, mgbe ahụ, ị ​​ga - edebanye aha njirimara na paswọọdụ gị iji banye. Mgbe ịbanye na akaụntụ gị, ịnwere ike iji mkpali n'otu ụzọ ahụ dịka ọ dị na mbu.
Ugbu a, ị maara otu esi gbanyụọ ọnọdụ offline na Steam. Ọ bụrụ na ndị enyi gị ma ọ bụ ndị nwere nsogbu nwere nsogbu na ịkwụsị ọnọdụ offline na Steam, nye ha ndụmọdụ ka ha gụọ isiokwu a.